2015 Myanmar Zodiac Download - 2015 Myanmar Zodiac 1.6 (Android) Free Download - Mobogenie.com
Home / Apps / Стиль жизни / 2015 Myanmar Zodiac Download
2015 Myanmar Zodiac
၂၀၁၅ ခုနွစ္အတြက္ ဆရာစံဇာဏီဘို ေရးသားထားတဲ့ ရာသီဖြားေဟာကိန္းတြေကို application အျဖစ္ထုတ္ေဝလိုက္ပါျပီခင္ဗ်။
ဒီapplicationထဲမွာ ၂၀၁၅ နိဒါန္း ၊ လူမွုေရး၊ အလုပ္အကိုင္၊ပညာေရး၊က်န္းမာေရး၊မိသားစုေရး၊အခ်စ္ေရးစသည္တို့အျပင္ ကံျမင့္ေစရန္ အေဆာင္အေယာင္မ်ား၊
ကံေကာင္းေစေသာနံပါတ္မ်ား၊ အေရာင္၊ အဝတ္အစား၊ ရတနာရြေးခ်ယ္မွုအျေကာင္းတို့ကိုပါထည့္သြင္းထားပါတယ္။
တစ္ပါတ္တစ္ခါ ေဖာ္ျပေပးမည့္ အပတ္စဉ္ ေဟာစာတမ္းလည္း ပါဝင္ပါတယ္။
ျမန္မာနိုင္ငံျပင္ပေရာက္ရွိေနတဲ့ ဆရာစံဇာဏီဘိုရဲ့ပရိတ္သတ္တြေ အလြယ္တကူ ဖတ္ရွူ့နိုင္ဖို့ရည္ရြယ္ျပီး ထုတ္ေဝေပးလိုက္ပါတယ္ခင္ဗ်ာ။
Google Play၊ 1mobile store တို့ မွာ 2015 Myanmar Zodiac ဆိုျပီး ရိုက္ရွာျကည့္နိုင္ပါတယ္။
ျမန္မာနိုင္ငံမွာေနေသာသူျဖစ္ပါက ဆရာ့ရဲ့ပညာကိုေလးစားေသာအားျဖင့္ မူရင္းစာအုပ္မ်ားကိုဝယ္ယူအားေပးနိုင္ပါတယ္။
၂၀၁၅ ခုနှစ်အတွက် ဆရာစံဇာဏီဘို ရေးသားထားတဲ့ ရာသီဖွားဟောကိန်းတွေကို application အဖြစ်ထုတ်ဝေလိုက်ပါပြီခင်ဗျ။
ဒီapplicationထဲမှာ ၂၀၁၅ နိဒါန်း ၊ လူမှုရေး၊ အလုပ်အကိုင်၊ပညာရေး၊ကျန်းမာရေး၊မိသားစုရေး၊အချစ်ရေးစသည်တို့အပြင် ကံမြင့်စေရန် အဆောင်အယောင်များ၊
ကံကောင်းစေသောနံပါတ်များ၊ အရောင်၊ အဝတ်အစား၊ ရတနာရွေးချယ်မှုအကြောင်းတို့ကိုပါထည့်သွင်းထားပါတယ်။
တစ်ပါတ်တစ်ခါ ဖော်ပြပေးမည့် အပတ်စဉ် ဟောစာတမ်းလည်း ပါဝင်ပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံပြင်ပရောက်ရှိနေတဲ့ ဆရာစံဇာဏီဘိုရဲ့ပရိတ်သတ်တွေ အလွယ်တကူ ဖတ်ရှူ့နိုင်ဖို့ရည်ရွယ်ပြီး ထုတ်ဝေပေးလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
Google Play၊ 1mobile store တို့ မှာ 2015 Myanmar Zodiac ဆိုပြီး ရိုက်ရှာကြည့်နိုင်ပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံမှာနေသောသူဖြစ်ပါက ဆရာ့ရဲ့ပညာကိုလေးစားသောအားဖြင့် မူရင်းစာအုပ်များကိုဝယ်ယူအားပေးနိုင်ပါတယ်။
This application include astrology articles for 2015 written by Myanmar famous astrologer ,Sayar San Zar Ni Bo.
Your social life in 2015,
Your education and occupation,
Heart status,Love affairs and family affairs,
Lucky numbers,color,jewels, such as..
We would like to thank you Sa Yar San Zar Ni Bo for his articles.
We are publishing this application for his fans around the world. If you are in Myanmar, you can buy his original books by respecting Sayar.
**** This application is embedded with Myanmar texts. You need to understand Myanmar Language to read these articles
Keywords: todays lifestyle lifestyle uk lifestyle homes shop lifestyle
2015 Myanmar Zodiac APK information
Similar to 2015 Myanmar Zodiac Change
2017 Baydin Book
My Baydin Horoscope
MiloShare File Uploader
zodiac signs celebrity news entertainment news star signs the intern entertainment tonight burmese classic horoscope signs entertainment weeklyeentertainment
Acer Liquid Z630s Acer Liquid Z630 Acer Liquid Z530S Acer Liquid Z530 Acer Liquid Z330 Acer Liquid Z320 Acer Liquid Z520 Acer Liquid Jade Z Acer Liquid Z220 Acer Liquid Z410 Acer Liquid Jade S Acer Liquid Jade Acer Liquid Z500 Acer Liquid E600 Acer Liquid E700 Acer Liquid Z200 Acer Liquid X1 Acer Liquid Z4 Acer Liquid E3 Acer Liquid Z5
Myanmar Zodiac 2014 Baydin.apk
Updates to 2015 Myanmar Zodiac may automatically add additional capabilities within each group.
صلاتك Salatuk (Prayer time) Talking Babsy Baby: Baby Games Daily Horoscope マクドナルド公式アプリ Tastely Assistant – Your Voice Aide Cool Gun theme for C Launcher Recharge, Payments & Wallet Syrup Wallet - 내게 필요한 혜택을 한번에! AutoScout24 - used car finder Luxury Diamond Gold Deluxe theme Clauncher XHubs